Kithi Endinaneni » Category » General » page 2
Umlando ngoMntwana(Prince) uNkulumana kaMzilikazi Khumalo.
In General / by Bongukholo Khumalo / on October 4, 2019 / No Comments
Umlando ngoMntwana (Prince) uNkulumana kaMzilikazi UMntwana uNkulumana Khumalo (iHlokohloko) wayeyinkosana yeSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi kaMashobana Khumalo uMthwakazi yisizwe esahlanganiswa iSilo uMzilikazi ngesikhathi sezimpi zoMfecane . Lesi sizwe sisekhona nanamuhla ,sitholakala en... qhubeka ufunde »
Umlando ngeNkosi uBheje Khumalo
In General / by Bongukholo Khumalo / on September 8, 2019 / No Comments
Umlando ngeNkosi uBheje Khumalo . Uma uzwa umuntu othukuthele efunga ethi “uBheje eseNgome” yazi ukuthi lowo muntu ungowakwaKhumalo isibongo . Leyo nkulumo abantu bakwaKhumalo babuye bayisebenzise njengesithakazelo . UBheje abantu bakwaKhumalo abafunga ngaye wayeyinkosi yabak... qhubeka ufunde »
Umlando ngoMbiko kaMadlenya Masuku UMbiko kaMadlenya wakwaMasuku wabe eyiqhawe leSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi kaMashobana Khumalo . ISilo uMzilikazi sasisuke kwaZulu zabheka enyakatho ngowe 1821 ngemuva kwengxabano neaLembe . Ngaleso sikhathi sasingakabi iSilo ,sasiseyingenye yezinduna zeSilo... qhubeka ufunde »